Wasiirka arrimaha dibedda oo ka hadlay xarunta Safaaradda ay Soomaaliya ka iibsatay Maraykanka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wasiirka arrimaha dibedda oo ka hadlay xarunta Safaaradda ay Soomaaliya ka...
Wasiirka arrimaha dibedda oo ka hadlay xarunta Safaaradda ay Soomaaliya ka iibsatay Maraykanka
Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Danjire; Axmed Ciise Cawad , ayaa ka faah-faahin ka bixiyay dib u furista Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay.
Mudane; Cawed ayaa aad u bogaadiyay Guriga Safaaradda Soomaaliyeed ee Maraykanka, kaas oo ay madaxda Dowladdu ka iibiyeen bartamaha Magaalada Washington DC, wuxuuna sheegay in wixii haatan ka dambeeya aysan ka baqayn in la weydiiyo kiro ama laga saaro xarunta Dalka laga matalo.
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawed oo u warramayay warbaahinta Qaranka ayaa soo hadal qaaday xiriirka soo wanaagsanaanaya eek ala dhexeeya Soomaaliya, isagoo tusaale usoo qaatay qaraarkii cunaqabataynta ahaa ee ay dhowaan golaha ammaanka u gudbisay Kenya in ay difaacday xukuumadda Washington.
Dhinaca kale, wasiir Cawed ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay in ay Safaaradda Maraykanka dib uga howl-billowday Muqdisho muddo dheer ka dib, wuxuuna sheegay in ay wixii haatan ka billowda sare u qaadi doonto tallaabadan sumcadda Dowladnimodeenna, iyadoo uu xiriirka Labada Dalna nonon doono mid toos ah oo aan loo dhaxayn.
Next articleXildhibaano Somaliland oo Tagaya Caleemo saarka Ahmed Madoobe.
Shirkadda GTS oo Soo Dhaweysay Go’aanka Madaxweynaha